ဤလျှောက်လွှာသည်သင်၏ဓာတ်ပုံနှင့်သင့်တော်မည့်စာသားကိုထင်သည် | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Luis del Barco | | အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ
ဓာတ်ပုံများကိုလူမှုကွန်ယက်များသို့တင်ခြင်းသည် Instagram တွင်အသုံးပြုသူများအသစ်၏အစာစားချင်စိတ်ကိုဘယ်တော့မှမပျောက်ဆုံးစေသည့်အချိန်တွင် (သူတို့သည်¡700 သန်း! ရက်အနည်းငယ်အကြာ) နှင့်သော စမတ်ဖုန်းတွေဟာပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ကင်မရာများကိုပိုမိုတပ်ဆင်လာကြသည်။ ရလဒ်များကိုမျှဝေလိုသည့်ဆန္ဒတိုးပွားလာသည်။ ပြဿနာ? လူမှုကွန်ယက်များသည်ဓာတ်ပုံကဏ္ivity၌သာမကကဏ္ aspects အားလုံးတွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုတောင်းဆိုသည်။
ငါတို့ဓာတ်ပုံအတွက်အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်၊ တစ်စုံတစ်ရာဖော်ပြပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်းကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကထားခဲ့ရလိမ့်မည်။ Instagram, Twitter သို့မဟုတ် Facebook ပုံများမှခေါင်းစဉ်ကောင်းတစ်ခုက၎င်းသည်ပိုမိုထိတွေ့မှုရှိလိမ့်မည်ဟုမအာမခံသော်လည်း တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအပိုထိတွေ့ခြင်းကဘယ်တော့မှမနာကျင်ပါ ငါတို့ဓာတ်ပုံဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းတင်လိုက်တာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြားနားဥာဏ်ရည်ရှိသူများအားဖြန့်ကျက်သည့်အချိန်များအတွက် App Store သို့မကြာသေးမီကရောက်ရှိလာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံများကိုဖန်တီးမှုခေါင်းစဉ်များထည့်သွင်းရန်အလွန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းကို Rubric ဟူသောအမည်အောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤ app ကိုအမှန်တကယ်အထူးပြုလုပ်ထားခြင်းကအကြံပြုထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့် hashtags ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံတွင်တွေ့ရသည့်အရာပေါ်အခြေခံသည် ငါတို့ရွေးချယ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်စစ်ဆင်ရေးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်အလွန်ကန့်သတ်ထားသည် (ဥပမာအားဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ယူသည့်ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါ၊ အချို့သောစာကြောင်းများကိုစပိန်ဘာသာမှပယ်ဖျက်နိုင်သည်)
၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်၊ သက်ဆိုင်သောဓာတ်ပုံမှသာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်အောက်ခြေရှိအညွှန်းသုံးခုပါသောမျက်နှာပြင်နှင့်သက်ဆိုင်သော hashtags, quote တစ်ခု၊ ငါတို့ရွေးချယ်လိုက်သောစကားလုံးပါသောသီချင်းတစ်ပုဒ်၊ အရာအနီရောင်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြပုံပေါ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောစာသားများရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် 'Post' ခလုတ်ကို၎င်းကို clipboard ထဲသို့ကူးယူပြီးလူမှုရေးကွန်ယက်ထဲသို့တာဝန်ဝတ္တရားကူးထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ » တီထွင်ဖန်တီးမှုမရှိ ဒီအက်ပ်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံများအားပိုမိုဆက်စပ်မှုဖြစ်စေ၊
ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုက Touch ID ကို iPhone 8 ရဲ့အရှေ့ဘက်ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်